Asylum ee USA: 2018 change to USCIS process | USAHello | USAHello
Asylum ee USA: 2018 change to USCIS process
Waxaa waa hab cusub oo loogu talagalay magangelyo USA. Laga bilaabo 2018, United States ah Citizenship and Immigration Services (USCIS) geedi socodkeeda bedelay. Codsadayaasha New ugu horeysay waxay heli doonaan dhagaysiga ay. Dadka hore u sugayso dhagaysi yeelan doonaan in ay sugaan waqti dheer.
Photo: Hector Silva - xushmad of Customs iyo Ilaalinta Xuduudaha
Nidaamka cusub ee magangelyo USA uu ka bilowday 2018
In ka badan 300,000 dadka ay sugayaan in la maqlo ku saabsan codsiyada magangalyo ee USA. Waxay qaadan doontaa wakhti dheer si loo eego codsiyada oo dhan iyo waraysi dhammaan codsadayaasha ah.
Si wax looga qabto dhibaatada, United States ah Citizenship and Immigration Services (USCIS) geedi socodkeeda bedelay ah wareysiga codsadeyaasha magangalyada ee 2018. Waxaa wareysiga codsadeyaasha cusub ugu horeysay oo ka shaqeeya dib u marayo liiska si cagsi ah. Akhri macluumaadka USCIS ku saabsan magangalyo jadwalka waraysi.
Kani waa amar cusub:
mudnaanta koowaad: Codsadayaasha ayaa loo qorsheeyay wareysi, laakiin waraysiga lahaa in la sheegin xilliga codsiga codsadaha ama baahida USCIS.
mudnaanta labaad: Codsiyada in ay ahayd ilaa 21 maalmood ama wax ka yar.
mudnaanta saddexaad: Dhammaan codsiyada kale ee ku raco magangelyo xoojin la qabanayaa waraysiyada laga bilaabo diiwaan gelintii cusub iyo dib u shaqeeya dhinaca diiwaan gelintii ka weyn.
Waa maxay sababta USCIS isbeddel si magangelyo USA?
Haddii aad dalbato magangalyo, waxaad codsan kartaa oggolaansho shaqo 150 maalmood ka dib. Markaas waxaad ka shaqayn kartaa ilaa aad aqbalay ama la diiday. USCIS ayaa sheegay in nidaamka cusub ee hoos u dhigi doontaa tirada dadka codsanaya magangelyo kaliya si aad u hesho ogolaanshaha shaqada. Haddii codsadayaasha cusub waxaa la tagaa marka hore halkii ay sugayaan sano, USCIS ayaa aaminsan in ay u badan tahay in aan codsan doonaa haddii aysan kiis wanaagsan. Tani waa sababta marka codsadayaasha magangelyo waxaa la diiday, waxay ka qaadi kara USA
Maxaa dhacaya haddii aan lagu sugayay aan waraysi, iyo kiiskeyga waa deg-deg ah?
USCIS oo sheegtay in ay ka fiirsan doonaan codsiyada degdeg ah si loo qorsheeyay wareysi ka baxsan si ay mudnaan sare ku qoran ee. Fadlan soo gudbi codsiyada jadwalka wareysi degdeg ah oo qoraal ah in aad Xafiiska magangelyo USCIS.
Maxaa ku saabsan qoyskeyga?
doone waa qaar ka mid ah ayaa la sugayay ilaa afar sano in la ansixiyey si ay carruurtooda ama xaaska uu iyaga ku biiro keeni kartaa. Waxa ay noqon doontaa mid aad u adag si ay u leeyihiin in ay xitaa dheer sugaan. u dooda xuquuqda aadanaha waxa ay ku dooneysaa USCIS si aad u ogaato habka cadaalad ah codsadayaasha kuwaas. Haddii aadan hore u la qareen ka shaqeeya, waxaan ku talinaynaa in loo helo qareen si uu kaaga caawiyo.
magangalyo-doonka updates macluumaadka
Raadi xafiiska degaanka ee USCIS